बलिउडमा यस्ता सेलेब्रिटीहरु छन् जो एक अर्कासँग काम गर्न चाहँदैनन्
सामान्य मानिसजस्तै सेलिब्रिटीहरुको मनपर्ने र नपर्नेहरु हुन्छन् । उनीहरु कसैसँग काम गर्न मन पराउँछन् भने कसैसँग काम गर्न मनै पराउँदैनन् ।
बलिउडका केही यस्ता कलाकारहरु रहेका छन् जसले नेपाली फिल्महरुमा पनि काम गरेका छन् । उनीहरुले नेपाली फिल्मलाई माया गर्ने पनि बताउँदै आइरहेका छन् ।
यस्तो बनेर आयो ‘ए मेरो हजुर–३’को ‘चिट डे’
काठमाडौं । अनमोल केसी र सुहाना थापा अभिनित फिल्म ‘ए मेरो हजुर–३’को नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । फिल्ममा समावेश गरिएको ‘चिट डे’ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गीतलाई गायिका प्रविशा अधिकारीले स्वरबद्ध गरेकी छन् । साथै गीतलाई प्रतिक पौडेलले संगीतबद्ध गरेका छन् ।
सलमानको ‘दबंग–३’ आइटम नम्बर गर्दै मौनी राँय ? चर्चामा सनी लियोनीको नाम पनि !
काठमाडौं/एजेन्सी । सुपरस्टार सलमान खानले आफ्नो फिल्म ‘भारत’को सुटिङ सकिसकेका छन्, भने अर्को फिल्म ‘दबंग–३’को सुटिङ गरिरहरेका छन् । यो सन् २०१० मा दर्शकमाझ रिलिजमा आएको फिल्म ‘दबंग’को तेस्रो सिरिज फिल्म हो । यो फिल्मलाई प्रभु देवाले निर्देशन गरिरहेका छन् ।
कंगनाले अंग्रेजी भाषा बोल्न नजान्दा...
एजेन्सी । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री हुन् कंगना रणावत । उनले पछिल्लो समय अभिनय गरेको फिल्म मनीकर्निकाले बक्स अफिसमा धमाकेदार कमाइ गर्न सफल भएको थियो ।
आजसम्म पनि खुल्न सकेन यी अभिनेत्रीको मृत्युको रहस्य
एजेन्सी । १९ वर्षको उमेरमा फिल्म इडष्ट्रीमा कदम राखेकी अभिनेत्री दिव्या भारतीको मृत्युको रहस्यबारे आज पनि उत्तिकै चर्चा हुने गरेको छ । कतिले उनको मृत्युलाई आत्महत्याको नाम दिएका छन् भने कतिले उनको हत्या भएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।